Vidiny - Forex Lens
Atombohy handray tombony
Ny vidiny rehetra dia amin'ny USD.
Atombohy amin'izao fotoana izao ny tombony
Fotoam-pivoriana marobe isan'andro mandehandeha eny an-tsena amin'ny varotra isan'andro.
Hevitra ara-barotra zaraina amin'ny vidin'ny Entry, Stop Loss, ary Take Profit miaraka amin'ny sanganasa sy ny fandaharam-potoana.
Famerenana horonantsary fohy isan'andro momba ny seho mivantana raha sendra tsy azonao io na tsy manam-potoana hijerena ireo fivoriana feno.
Horonantsary maodely mihoatra ny 100+ nalamina mba hanampiana anao hianatra ny fomba varotra.
Hiditra hatramin'ny tabilao 4